Wararka - Immisa jeer ayaa qalabka qalabka saxaafadda lagu beddelaa?
Immisa jeer ayaa qalabka qalabka saxaafadda lagu beddelaa?
Macaamiil badan ayaa weydiin doona inta jeer ee la beddelo qalabka qalabka wax lagu duubo markii ay iibsadaan? Waxay u muuqataa in dareenka isticmaalaha dhibaatadan uu aad u sarreeyo. Maanta, fursaddan awgeed, waxaan jeclaan lahaa inaan si faahfaahsan kaaga jawaabo su'aalahan.
Si taxaddar leh u falanqee, qalabka saxaafadda saliidda waxaa loo qaybiyaa qaybo xiran iyo qaybo. Sida magaca ka muuqata, xirashada qaybo waa qaybo u baahan in si joogto ah loo beddelo, qaybahaasna waxay leeyihiin nolol dheer umana baahna in la beddelo. Qaybaha xiran iyo qaybaha dayactirka ee mashiinka saliida.
Qaybaha xiran ee saxaafadda saliidda ku marooji guud ahaan waxaa ka mid ah: dunmiiqa saxaafadda, fur saxaafadda, giraanta duurka, duurka, caleen quudinta, giraanta keega, xoqida, baarka saxaafadda, iwm
Qaybaha saxaafadda saliidda muquuninta guud ahaan waxaa ka mid ah: jirka saxaafadda saliidda, qafis saxaafadda, jir, iwm.
Awoodda 260 warshad saliid waa 30-50 tan. Maxay awoodda daaweynta u liidataa? Tan waxaa badanaa lagu go'aamiyaa sida uu qabo saliida. Tusaale ahaan, markii qalabka wax lagu riixo riixo looska, adkaanshaha looska ayaa hooseeya, sidaa darteed way fududahay in la riixo, dharka mashiinkuna waa yar yahay. Sidaa darteed, wareegga beddelka qalabka ayaa dheer oo awoodda wax-qabadku way ka weyn tahay. Markaad riixdo miraha qaraha, waxaa lagu cadaadiyaa qolof. Adagida saliida way sarreysaa, xirnaashaha gudaha qolka saxaafada ee saxafiga saliida waa mid qatar ah. Wareegga beddelka agabku wuu yaraan doonaa, awoodda wax-qabadkeeduna way yaraan doontaa. Guud ahaan, marka laga reebo qaybaha nugul, qalabka wax lagu duubo ee saliidda ayaa la isticmaalay in ka badan toban sano iyada oo aan wax dhibaato ah laga qabin. Qalabka qalabka saliidayada saliida leh ayaa dhammaantood lagu farsameeyaa 24-saac oo ah kaarboon heerkul sare leh iyo daaweynta nitrogen. Waxaan haynaa shaqaale farsamo oo xirfad leh, aqoon isweydaarsi wax soo saar oo horumarsan, kooxda wax soo saarka xirfadleyda iyo kooxda iibka. 100% dammaanad tayada wax soo saarka iyo adeegga iibka kadib.
Saxaafadda saliida lagu maroojiyo waxay inta badan ka kooban tahay qolka saxaafadda, jir, sanduuqa marsada, masaafada wadarta iyo dekedda quudinta. Qalabka qaar ka mid ah usheeda dhexe ee saxaafadda iyo sanduuqa marshada waa sahlan tahay in la beddelo. Qalabkaani badanaa waa mashiinka fur, qalabka wax lagu dhejiyo, giraanta dahaarka, bushing, giraanta keega, xoqida, baarka saxaafadda, gawaarida gawaarida waaweyn iyo kuwa yaryar, qaadista, gacmo-gacmeedka, iwm. Qalabka ayaa xirnaan doona muddo dheer ka dib adeegga dharbaaxo, ama soo saar hooseeya, ma laha wax, taasi waa, qaybaha mashiinkaagu wuu jiran yahay oo wuxuu u baahan yahay in la beddelo.
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka Mashiinka Madbacada, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Yar, Saliida Olive, Mashiinka Saliida Qabow, Saliida Saliida, Saliida Saliida,